तुलसीपुरमा ड्रोन क्यामेरा ल्याउँदा पनि पत्रकार सम्मेलन! :: नारायण खड्का :: Setopati
तुलसीपुरमा ड्रोन क्यामेरा ल्याउँदा पनि पत्रकार सम्मेलन!
देख्नेहरुले भने - यो त ‘नाटकै भयो’
दाङ, फागुन २१
बिहान ९ बज्दै थियो।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको सम्मुखमा रहेको द पार्क क्याफेमा मेयर घनश्याम पाण्डे, उपमेयर माया आचार्य, उपमहागनगरका प्रवक्ता सूर्यबहादुर डाँगी (श्याम), तुलसीपुर उपममहानगरपालिकका नापी अधिकृत प्रदीप ज्ञवालीलगाएतका आए।
उनीहरूको अघिपछी तुलसीपुर क्षेत्रमा क्रियाशील पत्रकार पनि त्यहीँ पुगे।
उपमहानगरपालिका भित्र बिहान ८ बजेदेखि पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो। अघिल्लो दिननै त्यसको सूचना पत्रकारलाई दिइएको थियो।
नापी अधिकृत ज्ञवालीले ड्रोन क्यामेराको उपयोगिताबारे पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएका थिए।
ज्ञवालीले भूमि प्रशासन, भूमी व्यवस्थापनका चुनौती र रुपान्तरणकारी योजनाबारे कुरा राखे। उनले कानुनी निर्देशिकाअनुसार उपमहानगरपालिकामा ड्रोनबाट नक्साङ्कन गर्ने योजना बनाइएको बताए ।
उनले ड्रोन क्यामेराले झन्डै ८ हजार मिटर टाढाको स्थानमा रहेर तस्बिर र भिडियो लिन सकिने बताए।
उनका अनुसार यो ड्रोन क्यामेरालाई १ सय २० मिटर माथि सम्म उडाउन सकिने छ ।
कार्यक्रममा नगरप्रमुख पाण्डेले तुलसीपुरको सम्रग भूमी व्यवस्थापन, योजनाको अनुगमनलाई छिटो छरितो बनाउन ड्रोन सेवाले थप मद्दत गर्ने जानकारी दिए।
‘स्थानीय तहको निर्वाचनमा बोलेका कुरालाई पछ्याउदै अघि बढेका छौँ,’ पाण्डेले भने,–‘उपमहानगरपालिकाको बजार क्षेत्रलाई निगरानी गर्ने ड्रोन क्यामेराले थप मद्दत गर्ने छ।’
ड्रोनको माध्यमबाट भू-सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने कामलाई सहज हुने उनले बताए ।
‘अहिले भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित रूपमा बसोबासीको लगत संकलन गर्ने काम भइरेहको छ र अब तत्कालै हामी त्यसको लागि जग्गा नापजाँच गर्ने कामको सुरूवात गर्नेछौँ,’ उनले भने, ‘त्यो कामलाई छिटोछरितो बनाउनका निम्ति ड्रोन सेवाबाट त्यसको नापजाँच गर्ने र छिटो भन्दा छिटो भूमीहीन दलित, सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा प्रदान गर्ने काम अघि बढाउने छौं।’
तुलसीपुर स्मार्ट सिटीको रणनीतिक योजना अनुसार काम अघि बढाइएको बताए ।
कार्यक्रममा उपमेयर आचार्यले स्वागत ड्रोन क्यामेराको प्रयोगले काम छिटो छरितो हुने र धेरै व्यक्तिले गर्ने काम एउटै उपकरणले गर्न सकिने बताइन्।
करिब पौंने घन्टा लामो औपचारिक पत्रकार सम्मेलनपछि ‘द पार्क क्याफेमा’ आए। ड्रोनको प्रयोग तथा परीक्षण उडानका लागि भन्दै पत्रकार पनि त्यहीँ पुगे।
ड्रोनको रिमोट नापी अधिकृत ज्ञवालीको हातमा थियो। उनले केही बेर चलाएपछि उडाउने प्रयास गरे। तर, ड्रोन हलचल गरेन। केही बेरको प्रयासपछि ड्रोन टेबुलमा राखियो।
उडाउने सबै तयारी भएपछि मेयर पाण्डेको हातमा रिमोट दिइयो। मेयरले पनि त्यो चलाउन प्रयास गरे। तै पनि हलचल भएन। त्यतिकैमा भिडबाट एक जनाले ‘पेट्रोल हालेको छैन कि,’ भनेर रमाईलो गरे ।
अर्का एक जनाले ‘एयरपोर्टमा स्थापना गर्ने भनिएको इन्धन डिपो हालसम्म अनिश्चित भएर होला’ भन्ने कुरा गरे। त्यहाँ जम्मा भएका मध्य मेयर पाण्डे ठूलो आवाजमा हाँसे। त्यो देखेर एकले अर्कोलाई हेर्दै अरू पनि हाँसे। हाँसो गुञ्जायमान भयो।
फेरि रिमोट नापी अधिकृत ज्ञवाली लिए। केही बेरको प्रयासपछि टेबुलबाट ड्रोन भूईमा सारियो। न्यानो घाम लागेको थियो । बल्ल ड्रोन चलमलाएझैं गर्न थाल्यो।
त्यसपछि रिमोट मेयर पाण्डेको हातमा थमाइयो। ड्रोन भूईबाट घिस्रिँदै नापी अधिकृत ज्ञवालीको खुट्टामा गएर जोतियो। ‘अहो...दूर्घटना भयो’ भन्ने आवाज भिडबाट गुञ्जियो।
निकै बेरको प्रयासपछि मात्र ड्रोन उड्यो। त्यो देखेर मेयर पाण्डेसहित उपस्थित सबैले खुसी हुँदै ताली बजाए। ड्रोन आँकाशमा उडेको तस्विर खिच्न तछाड मछाड जस्तै भयो।
४/५ मिनेट जति उडाएपछि ड्रोन भूईमा अवतरण गराइयो। फेरि खुसियालीमा ताली बजाइए।
नजिकै चिया कफि खाँदै ड्रोन उडाएको नियाली रहेका नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य यूवराज खड्का, दाङ क्षेत्र नं. ४ का नेपाल तरूण दलका अध्यक्ष रमेश मल्ल, तुलसीपुर नगर समिति अध्यक्ष सुनिल डाँगीलगायतले त्यसलाई नौटंकीको संज्ञा दिए। ‘धेरै देश घुमेका, पढे-लेखेका मेयरसा’प यस्तो सस्तो लोकप्रियतामा रमाउनु हुन्छ भन्ने लागेको थिएन,’ ग्रुपकै एक जनाले भने, ‘केपी ओलीको नक्कल गर्दै उहाँ पनि कामभन्दा बेसी प्रचारबाजीमा रमाउन थालेको देख्दा दुःv लाग्छ।’
पूर्व केन्द्रीय सदस्य खड्काले उपमहानगरपालिकाले एउटा ड्रोन किनेर ल्याउँदासमेत पत्रकार सम्मेलन गर्नु आफैंमा हाँसी मजाग भएको प्रतिक्रिया दिए।
‘काम कम र प्रचार बढी देखियो,’ उनले भने ‘ काम गरेपछि त आफैं न्यूज बनिहाल्छ नि, के ड्रोन किनेर ल्याउँदा पनि पत्रकार सम्मेलन गर्नु पर्छ र ? यो त नाटकै भयो।’
तरूण अध्यक्ष मल्लले पनि आशा गरिएका मेयर प्रचारबाजी र सस्तो लोकप्रियातामा रमाउन खोज्दा त्यसले उनकै उचाई घटाएको टिप्पणी गरे।
‘ब्यक्ति विशेषले थुप्रै ड्रोन घर घरै भित्र्याइसकेका छन्। यस्तो बेला नगरपालिकाले एउटा ड्रोन किनेर ल्याउँदासमेत पत्रकार सम्मेलन गर्नु आत्मरतिमा रमाउनु समान हो,’ उनले भने।
खरिद मूल्य पनि बढी
नापी अधिकृत ज्ञवालीका अनुसार उपमहानगरपालिकाले ३ लाख ५० हजार मूल्य तिरेर ड्रोन खरिद गरेको हो। उनले अतिरिक्त ब्याट्रीसमेत किनेर ल्याइएको जानकारी दिए।
यसैबीच संवाददाताले यसको बजार मुल्यबारे बुझ्दा २ लाख ६८ हजार हाराहारी पर्ने थाहा भयो।
विभिन्न अनलाइन सपिङ मार्केटमा पनि यसको मूल्य उपमहानगरपालिकाले किनेको भन्दा १ लाख कममै पाइने रहेछ।
तुलसीपुर क्षेत्रका सरोकारवालाका अनुसार उपमहानगरले ड्रोन खरिदमा समेत अनियमितता गरेको आरोप लगाएका छन्।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन २१, २०७७, ०२:३२:००